Ciidamada Danab oo howl-gallo ka wada duleedka degmada Balcad | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidamada Danab oo howl-gallo ka wada duleedka degmada Balcad
Ciidamada Danab oo howl-gallo ka wada duleedka degmada Balcad
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee DANAB ayaa howlgal isugu jira Miino baaris iyo amni xaqiijin ah kawada wadada isku xirta Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad Gobolka Shabeelaha Dhexe ee Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Saraakiil katirsan DANAB ayaa sheegay in howlgalkooda joogto ka dhigeen, kadib markii cabasho ka timid isu socodka wadadaas oo marar kala duwan qaraxyo iyo weeraro jidgal ah ay ka geysteen Al-Shabaab.
Inta ay ku guda jiraan howlgalkaan oo bilawday todobaadkaan waxa ay saraakiishu tilmaameen in ay kusoo saareen miinooyin Al-Shabaab wadada geliyeen, halka ay burburiyeen goobo ay dhisteen sida ay hadalka u dhigeen.
Madaxda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle waxaa loo gudbiyay cabasho ka dhan ah xaaladda amni ee wadada xiriirisa Magaalooyinka Jowhar iyo Balcad, kadib markii lagu dilay Xildhibaanno, saraakiil, Askar iyo xubno katirsan AMISOM.
Wasiirka Amniga Hir-Shabeelle waxa uu si cad u sheegay in Al-Shabaab culeys saareen wadadaan, maadaama Gobolka Shabeelaha Hoose ay uga tageen duqeymaha diyaaradaha Duulliye la’aanta (Drones) ee Mareykanka.
Mas’uulkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ku dishay wadadaas waxa uu ahaa Xidlhibaan Xaaji Maxamed Maxamuud Siyaad oo 5-tii July 2020 xubno katirsan Al-Shabaab kala degeen gaari uu la socday oo isaga kala gudbayay Jowhar iyo Muqdisho.
Waxaa go’ay isu socodka gaadiidka Mas’uuliyiinta Hir-Shabeelle ee wadada u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad, taasi waxa ay sababtay in qaylo dhaanta gaarto Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo kulamo la qaatay Madaxda DFS, AMISOM iyo wakiilada Beesha Caalamka si loo gacansiiyo
Maqaal horeKooxda Al-Shabaab oo laga xoreeyey deegaanka Janaa-Cabdala
Maqaal XigaCiid oo la kulmay xubno ka tirsan safaraarada Talyaaniga
Akhriso:Magacyada Golaha Wasiirada Cusub ee Caawa uu ku dhawaaqay RW Rooble.